zawgyi-keyboard-0.3.0 release out – box02's little blog
August 5, 2009 by box02
မနေ့ညက zawgyi-keyboard-0.3.0 release ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ post မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ features အသစ်လေးတွေပါဝင်တဲ့အတွက် users များအတွက် package install လုပ်ရတာရော remove လုပ်ရတာရော လွယ်ကူစေပါတယ်၊ font upgrade feature ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်လဲ users များအတွက် အဆင်ပြေစေအောင်လို့ပါ။ ကိုစိုးမင်းရဲ့ဇော်ဂျီဖွန့်အသစ်က migration stage တွေနဲ့အတူ ဆက်လက်ထွက်အုံးမှာမို့ ဒီ font update function နဲ့ အသစ်ဆက်ထွက်လာမယ့် font ကို ဆက်ပြီး upgrade လုပ်သွားရုံပါပဲ။
ဒီ zawgyi-keyboard 0.3.0 version မှာ ဇော်ဂျီဖွန့်အသစ်ရဲ့ original unicode style keyboard layout နဲ့ထွက်တာမို့ ပတ်ဆင့်တွေရိုက်ဖို့အတွက် `shift + f` ကိုသုံးပါတယ်၊
ဒီ zawgyi-keyboard package ကိုအောက်ကလင့်ကနေ direct ရယူပါ၊
downloaded package က Desktop ပေါ်မှာဆိုရင်
package ကို ဖြည်မယ်ဆိုရင်
$ tar xzf zawgyi-keyboard-*.tar.gz
entering into source package directory
package ကိုဖြည်ပြီးတဲ့အခါ ရလာတဲ့ source package folder ထဲဝင်ရအောင်
running zawgyi_keyboard.py script
package install , uninstall စသည့် functions တွေ run ဖို့အတွက် main program ကို စပြီး run ရအောင်၊ ဒီလို package install, uninstall လုပ်တာက system administration tasks ထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် root permitted ရဖို့ဒါမှမဟုတ် admin permitted ရဖို့လိုတဲ့အတွက် ဒီ python script ကို စစချင်း run စဉ်မှာတင် ကျနော်တို့ sudo ဒါမှမဟုတ် su နဲ့ စပြီး run ရအောင်
# python zawgyi_keyboard.py
အဲလို Terminal ထဲမှာ type ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ zawgyi_keyboard python program က စတင်အလုပ်လုပ်ပြီး ဘာ tasks ကိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာ မေးပါမယ်။ ဥပမာ ..
[i] install, [r] remove, [u] font update, [h] layout help, [q] exit :
အဂဿငလိပ်အကဿဿခရာ စလုံးအသေး ` i ` ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင် package ကို install လုပ်ပေးပါမယ်၊
` r ` ကိုနှိပ်တဲ့အခါ package ကို uninstall လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
` h ` ကိုနှိပ်ရင် font upgrade လုပ်မယ့် function က run ပြီး ခင်ဗျား upgrade လုပ်ချင်တဲ့ new zawgyi font ရဲ့ နေရာ (directory) ကိုမေးပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမေးတဲ့အခါ အဲဒီဖွန့်ရဲ့ ဖိုဒါလမ်းကြောင်းကို ရိုက်သွင်းပေးရမှာပါ။ ဥပမာ .. new zawgyi font (latest release) က download လုပ်ပြီး desktop ပေါ်မှာထားရင် သူ့ရဲ့ directory path က
`/home/username/Desktop` ဖြစ်မှာပါ ကိုယ့်ရဲ့ system အလိုက် ကိုယ့်ရဲ့ downloaded new font directory path ကို ရိုက်သွင်းပေးရမှာပါ။ အဲလိုရိုက်သွင်းပြီးတဲ့အခါ program က လက်ရှိစက်မှာသွင်းထားတဲ့ဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ ခုခင်ဗျားရိုက်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ new downloaded font ကိုယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ user က ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ font update function ကလဲ in case မှသုံးရတာပါ၊ ဥပမာ new zawgyi font ကို testing လုပ်နေသူများအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်မှာပါ။
ဒီ python script က အရင်က shell scripts တွေအတွက် all in one လဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆို install လုပ်ဖို့အတွက် install.sh script ကို run ရတာ remove လုပ်ဖို့အတွက် uninstall.sh script ကို run ရတာရယ် နောက်ပြီး FreeBSD Gnome2 အသုံးပြုသူများအတွက်လဲ install_freebsd.sh ကိုသုံးရတာတွေဟာ ခု py script နဲ့ကျ တစ်နေရာတည်း တပြေးညီတည်း တချိန်တည်းမှာ run နိုင်ကြပါပြီ။ ဒီ package ကလဲ users and learners များအတွက် အဓိက ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီ zawgyi_keyboard.py script နဲ့ ပတ်သက်ပြီး errors တွေ bugs တွေ တွေ့ရှိပါက reports, fix, pitches တွေရေးပြီး ကျနော့်ဆီ ပေးပို့ဖြင်း တဖက်တလမ်းက ကူညီကြပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
အောက်မှာ screenshots လေးတွေကြည့်ရအောင်…
installing package by pressing letter ( i )
looking up layout option help by pressing ( h )
trying font update function
choosing myanmar layout
getting US and Myanmar layouts
choosing keys to change between us and zawgyi keyboard layouts
Applications > System Tools > Zawgyi Keyboard
testing new zawgyi keyboard on gedit
see those screenshots on Picasa
enjoy with new zawgyi-keyboard-0.3.0 release 🙂
This entry was posted in Linux, Prgramming, Software, Unix, Zawgyi and tagged FreeBSD, Linux, Package, Python, release, Script, Zawgyi. Bookmark the permalink.
← zawgyi-keyboard-0.3.0 will be released with new features
how to upgrade zawgyi font with zawgyi_keyboard.py →
4 thoughts on “zawgyi-keyboard-0.3.0 release out”
Thuyein | September 11, 2009 at 11:26 am
I still haveaproblem while change the Keyboard from US to Myanmar. Please tell me what can I do. I can’t change with Alt+ Shift keys.
box02 | September 11, 2009 at 3:19 pm
um .. have you try this instruction? keyboard-layout-manual please download this manual and prepare for your keyboard layout preferences. It is old manual for zawgyi 2008. But you can use it for zawgyi 2009 too. And leave Third Level Choosers preference which you might not need in zawgyi 2009.
please be sure that there should be only one check mark in `Keys to change layout` option.
Talkii | December 8, 2009 at 7:51 am
Hello from Linux Mint 🙂
linux စမ်းသုံးရင် ဇော်ဂျီတစ်ဆင့်ချင်း လုပ်သွားလိုက်တယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူး။
box02 | December 19, 2009 at 12:48 pm
Hi from Debian GNU/Linux, 😀
အဆင်ပြေတာသိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်. ကို Talkii , welcome ပါ. 🙂